Nzira yekubvisa sei madomasi matomatisi | Bezzia
Maitiro ekubvisa matomatisi mavara
Tony Torres | 10/06/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 10/06/2021 11:01 | Musha
Kubvisa madomasi matomatisi kunogona kunge kwakaoma zvakanyanya, kunyanya kana banga racho riri pamachira asina kusimba kana kana richibvumidzwa kuoma zvakanyanya. Kuita nekukurumidza kwakakosha kubvisa madomasi matomatisi zvachose. Nekudaro, kunyangwe iwe usinga cherekedze banga panguva ino uye maawa akati apfuura, nehumwe hunyengeri zvinokwanisika kuzvibvisa zvachose.
Izvo zvakakoshawo kuti utarise kuti ndewemhando ipi yemadomasi iyo yakaburitsa huturu, sezvo chaiwo madomasi asina kufanana nemadomasi muto. Tomato-based sauces senge ketchup, mukuwedzera kune tomato dhizaini, ine mafuta, zvinonhuwira, uye liqueurs. Saka nhanho dzinotevera dzinenge dzakati siyanei muchiitiko chimwe nechimwe. Kutevera iwe uchawana mamwe matipi ekubvisa matomatisi.
1 Bvisa matomatisi chaiwo
2 Tricks kubvisa yakakangwa madomasi matangi
3 Mamwe matipi
Bvisa matomatisi chaiwo
Iyo chaiyo nyanya iri nyore kubvisa, nekuti haina chero zvimwe zvinongedzo kana zvinowedzera zvinomesa banga. Nekudaro, maitiro acho akasiyana kana iwe uri kuyedza kubvisa nyowani tsvimbo yemadomasi, pane kana yatove stain yatooma. Muchiitiko chekutanga iwe unofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Kutanga bvisa chasara chikafu nechipunuKana chipfeko chisina kusimba, usashandise simba kuti usakanganise tambo.
Isa nguo yacho pasi perukova rwemvura inotonhorera, ichirega ichimhanya kubva mukati mehembe kusvika kunze.
Nyorera shoma shoma yekushambidza Dishwasher uye pukuta neminwe yako.
Sukurudza nemvura inotonhorera kusvikira furo inosuka yabviswa zvachose.
Enderera ku gezai hembe zvakajairika.
Kana iyo yakasviba nyanya nyanya yakaoma, unofanirwa kutevedzera nhanho idzi kuti ubvise zvachose.
Dampen a machira ekotoni ane chena vhiniga kuchenesa.
Nokungwarira, zora padomasi tsvina kusvika yabviswa zvachose.
Enda uchishandisa nzvimbo dzakasiyana dzejiraIzvi zvinodzivirira madomasi kubva kuendesa kune mamwe mativi enguo.
Sukurudza nemvura inotonhorera uye wogeza mumuchina wekuwacha semazuva ese.
Tricks kubvisa yakakangwa madomasi matangi
Yakapakirwa matomato sauces ane zvinopfuura chimwe chete chinhu, izvo zvinoita kuti kubvisa zvisingadiwe zvishoma kuoma. zvipfeko zvemachira. Nekukurumidza iwe kuita, iwe ungangoita iwe kuti ubvise iyo nyanya yetomatisi. Saka kana iwe ukawana yakakangwa nyanya nyanya pahembe dzako usaisiye mutswanda yekuwachira yakamirira kusuka. Tevedza nhanho idzi uye iwe unogona kubvisa nyanya yetomatisi kubva pambatya dzako.
Mumunhu anogamuchira sanganisa baking soda nemvura shoma. Iwe unofanirwa kuwana girafu rinonamira kuti uchenese banga.
Paridza pasoda pasita pachivara uye siya kwemaminetsi gumi nemashanu.
Nguva yakafamba, bvisa musanganiswa uye sukurudza nemvura inotonhorera.
Dzokorora matanho aya kusvikira dovi remadomasi raenda zvachose.
Pakupedzisira, gezai nguvo yacho senguva dzose mumuchina wekuwachisa.
Kuita nekukurumidza kwakakosha, asi iwe unomhanyisa njodzi yekuita sarudzo dzakashata uye nekuwedzera kuomesa mamiriro acho. Imwe yemaitiro ekutanga patinowana matomatisi kusvibisa kushandisa napkin kubvisa zvisaririra, chimwe chinhu chisina mubvunzo chikanganiso. Iyo jira rinowedzera kuparadzira vara uye inobatsira kuti iiswe zvakanaka nemicheka yejira.
Zviri nani muzviitiko izvi kushandisa chipunu kana banga kubvisa zvisaririra zvekudya, pasina njodzi yekuparadzira banga. Iwe haufanire zvakare kushandisa kuomesa kana uchisuka mbatya dzako dzemadomasi, sezvo kupisa kunobatsira gwapa kugadzirisa zvakanaka pane tambo dzejira. Paunenge uchisuka nguvo, tendera kuti iome mumumvuri kudzivirira kupisa kubva pakuisa tsvina uye kuti iome kubvisa.
Chekupedzisira, kana iwe uine dhita remadomasi pazvipfeko zvako uye hapana imwe yeaya manomano anokushandira, usaore moyo. Usati waedza dzimwe sarudzo, kunyangwe chimwe chinobvisa tsvina pamusika, mirira kubvisa mhinduro yapfuura. Ndokunge, geza nguo uye rega iome zvachose. Ipapo iwe unogona kuyedza chero humwe hunyengeri pasina njodzi yekukuvadza mbatya dzako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Maitiro ekubvisa matomatisi mavara
6 matsotsi emanoja anouya kuzokukochekera
Zviratidzo zve pharyngitis